Maalinta: Meey 9, 2020
Waxaa lagu soo waramayaa in nooca cusub ee coronavirus ee ka soo baxaaya magaalada Wuhan ee gobolka Hubey ee dalka Shiinaha loo gudbiyo in ka badan 3 milyan 981 kun oo qof oo adduunka ah. Sida lagu sheegay bayaanka uu soo saaray xafiiska warfaafinta ee Madaxtooyada, 3 milyan 981 [More ...]
Garoonka Istanbul Sabiha Gökçen International (OSHA), Covidien-19 ee guud ahaan Turkey ka leexinayn ee tallaabooyinka loo qaaday sababtoo ah dillaacay on March 28 at albaabka sidii in la siiyo ogolaansho ku meel gaadh ah oo ah masuuliyiinta ka dib markii lagaga adeego oo 28 [More ...]
Degmada Samsun ee Magaalo-Weyne ayaa ka fulineysa mashruuc muhiim ah magaalada Doğupark. Marxaladda koowaad ee xad-dhaafka ah ee leh kor u qaad, kaas oo u fududayn doona nolosha waayeelka iyo curyaamiinta naafada ah, ayaa lagu dhammeyn doonaa waqti gaaban oo shaqada la gelin doonaa. Samsun Magaalo-weyne [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Kayseri waxay sii wadaysaa howlaheedii cusboonaysiinta ee lagu joojiyay jidadka banaanbaxyada darteed. In kasta oo qaar ka mid ah howlaha kaabayaasha KASKİ laga fuliyo waddooyinka qaar ee ku yaal bartamaha magaalada, ayaa haddana kooxaha ka shaqeeya sayniska ay sidoo kale qabtaan shaqooyin dammaanad qaadaya. Dawlada Hoose ee Magaalada [More ...]
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Istanbul, Ekrem İmamoğlu, ayaa baaritaano ka sameeyay laba goobood oo dhismaha ah oo ku yaal labada dhinac ee Anatolia iyo Yurub, kuwaasoo wali ka shaqeynaya bandowga. Joogsiga ugu horreeya ee Imamoğlu wuxuu ahaa inuu bilaabo maamulkii hore ee 2017 oo uu joojiyo isla sanadkaas. [More ...]
Iyada oo ay hogaaminayaan Wasiirka Difaaca Qaranka Hulusi Akar, Taliyaha Guud ee Ciidamada Gen. Yaşar Güler, Taliyaha Ciidamada Dhulka Gen. Ümit Dündar, Taliyaha Ciidamada Badda Admiral Adnan Özbal, Taliyaha Ciidamada Cirka Hasan Küçükakyüz iyo Qaranka. [More ...]
Wasiirka Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada Zehra Zümrüt Selçuk ayaa ku dhawaaqay in 7 daawo oo dheeri ah lagu daray liiska magdhawga, 4 kansarka iyo 11 loogu talagalay daaweynta MS. Waxaa dib loogalaabtay SUT cusub [More ...]
Wadada tareenka ee Bursa-Bilecik ayaa ah wado tareen oo heerkeedu sarreeyo oo lagu rakibi doono qadka tareenka xawaaraha sare ee Ankara-Istanbul marka la dhammeeyo.Khadka tareenka ee heerkiisu sarreeyo ayaa laga dhisayaa inta u dhaxaysa Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli ilaa xadka khadka. Mashruuca Bursa-Yenişehir oo ah 105 km oo mashruuc ah ayaa lagu xirayaa qadka Ankara-Istanbul oo ka socda Bilecik [More ...]
Ayadoo la codsanayo in la tirtiro “Qiimaynta Saameynta Deegaanka (EIA) go’aanka wanaagsan” ee 17ka Janaayo 2020 ee Mashruuca Kanal Istanbul ee looga soo horjeedo Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalaynta Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Istanbul. [More ...]
Joojinta duulimaadyada ee ka dhacey masiibada Covid-19 waxay garoomada diyaaradaha u rogeen magaalooyin cirfiid ah. Bishii Abriil, taraafikada rakaabka ayaa hoos u dhacday boqolkiiba 99 marka la barbar dhigo bishii hore, halka 84 kun oo qof oo keliya ay awoodi karaan inay duulaan. 65 kun oo ka mid ah [More ...]
Nooca labaad ee AKINCI Offensive Unial Veh Vehicle (TİHA), oo ay naqshaday injineerrada Difaaca Baykar oo howshiisa wax soo saarkoodu uu weli socdo, ayaa dhowaan sameyn doonta duulimaadkeedii ugu horreeyay. Maareeyaha Farsamada ee Baykar Defence Selçuk Bayraktar Akıncı [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Adil Karaismailoğlu wuxuu sameeyay afaf ah shaqaalaha ka shaqeeya Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara - Istanbul T26 Tunnel Site. Karaismailoğlu, oo ay weheliyaan shaqaale ka socda goobta dhismaha ee degmada Bilecik ee Bozüyük, sannadkan waa nooc cusub [More ...]
Ankara ayaa dhammeystirtay Tunnida T14 ee gaabin doonta 26 daqiiqo
Karaismailoğlu, oo baarayay goobta dhismaha ee Tey Tunnel ee degmada Demirköy, oo ka socota dhismaha baaxadda Mashruuca Xawaaraha Xawaare ee Ankara-Istanbul, ee degmada Bozüyük, wuxuu qaadaa dhammaan tallaabooyinka la socda talooyinka ay soo jeedisay Wasaaradda Caafimaadka ee ku saabsan nooca cusub ee coronavirus (Kovid-26). [More ...]
3 Milyan oo Toban Oo xamuul ayaa lagu qaadi doonaa Khadka Sivas Samsun Railway
Ka dib markay shaqeynayeen muddo 83 sano ah, howlihii qadka tareenka ee Samsun-Sivas, oo loo xiray gaadiid si loo casriyeeyo 29-ka Sebtember, 2015, ayaa dhammaaday. Dhammaan kaabayaashii iyo qaab dhismeedka suufiyada ee 431 kiiloomitir ayaa la cusbooneysiiyay Yurubna waa ay ka soo cusboonaatay [More ...]
Tareenka xamuulka qaada oo wata alaabo caag ah oo ka sameysan Gaziantep ilaa Çorlu ayaa dhameystiray marinkeedii Marmaray iyadoo ay weheliso wasiir Karaismailoğlu. Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Adil Karaismailoğlu, waa xamuulkii ugu horreeyay ee gudaha ah ee ka tallaaba Marmaray 08.05.2020 [More ...]
Si gaadiidka looga dhigo mid xasilloon oo aan kala go 'lahayn, Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli, oo sii wadata shaqadeeda cudurka faafa ee coronavirus, dhismooyinka dhagxaanta ee isgoyska hortiisa ee Orduevi ee Izmit Büyük Seka Tunnel usbuucii hore. [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay fulineysaa dalabka "qaan-sheegashada hangara", oo ka bilaabatay magaalada Istanbul, ee Izmir markii la eego baahida shacabka. Biilasha biyaha ee qoysaska haysta dhibaatooyinka dhaqaale ee masiibada adduunka waxaa lagu bixin doonaa wadajirka İzmir. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, [More ...]
Madaxweynaha warshadaha Difaaca Madaxtooyada Turkiga. Dr. Demsmail Demir, sarkaalka SSB AdigaTube Su'aalaha ayuu kaga jawaabay kanaalkiisa. Khudbadiisa, halka İsmail Demir uu ku qiimeeyay xaalada guud ee waaxda, LHD labaad wuxuu la xiriiray TCG TRAKYA. [More ...]
Beeraha iyo Dhirta iyo Wasaaradda Nature Ilaalinta iyo hooyo Parks (DCM) Agaasinka Guud ee Qaranka Turkiga jeexan deerada (Akeldama Akeldama) badbaadinta, sii-soo-saarka iyo sii daayo waxbarashada. Macnaha guud, dabeecada Antalya Manavgat [More ...]
Marka la eego baaxadda mashruucan cusub ee Warshadaha Warshadaha Mashiinka iyo Warshadaha (MKEK), khadka cusub ee waxsoosaarka oo lagu sameeyay mashiinno gudaha ah iyo kuwa qaran ayaa ka shaqeynayay Warshadda Gazi Fişek. Waxay gebi ahaanba baabi'in doontaa ku tiirsanaanta dibedda, gebi ahaanba [More ...]
Agaasinka Guud ee Maareeyaha Maamulka Garoomada Diyaaradaha - Qandaraaslaha Imtixaanka Gawaarida Hawada Diyaaraduhu waxay shaaciyeen macluumaadka ku saabsan machadka iyo mowqifka laga qaadayo Unugyada Imtixaanaadka: Agaasinka Guud ee Maamulka Garoomada Diyaaradaha ee Gobolka. [More ...]
Haddii hawlgab la bixin doono ka hor fasaxa wax yar ka hor fasaxa oo ah ajandaha malaayiin hawlgab ah. Zehra Zümrüt Selçuk, Wasiirka Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada, oo leh lacagaha hawlgabka [More ...]
Hordhac Luuqada Luuqadda Turkiga ee Ardayda Naafada ah Isbuuca
Wasiirka Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada, Zehra Zümrüt Selçuk, ayaa ku dhawaaqday inay ka fulin doonaan howlo wacyigelin ah marka loo eego baaxadda barnaamijka EBA ee 10-ka Meey 16-ka May. Wasiir Selçuk; “Waxaa shaaciyey Madaxweynahayaga Mudane Recep Tayyip Erdoğan [More ...]
Lacagta caddaanka ahi kama dhex mari doonto Tagayaasha Ganacsi! Taksi lama qaadi karo maaskaro la'aan!
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa u dirtay wareegto taxaddar nadaafadeed oo taksiile ah oo leh 81. Marka loo eego wareegga, tagaasida ayaa la baabiin doonaa toddobaad kasta, macaamiisha ma awoodi doonaan inay helaan taksi la'aan maaskaro. Wadayaasha tagaasida ganacsiga waxay u dhaqmaan si waafaqsan xeerarka nadaafadda shaqsiyeed [More ...]
Tareenku wuxuu burburiyey dadka heerar isgoysyada ah ee Frankfurt 1 dhintay, 2 dhaawac ah
Shil aad u xun ayaa ka dhacay degmada Nied ee Frankfurt, Jarmalka, abbaare 20.00-dii fiidnimo ee xalay. Marka loo eego hadalada markhaatiyaasha goobjoogayaasha, si dhakhso ah ayaa ku imaaday tareenka dadka jajaban halka caqabadaha ay furan yihiin. Faahfaahinta shilka shilka kadib [More ...]